संघियताले जन्माएका प्रश्न
तराइमा आन्दोलन किन भैरहेको छ ? हिजो १ मदेश प्रदेश भनेर आन्दोलन गरेका जनता आज किन फेरि सडकमा मर्न तयार भएका छन ? हिजो मधेश बाहेक अरु नचाहिने लाई आज किन फेरि चुरे छेत्र पनि चाइयो ? के यि मधेशि साच्चिकै संघियता चाहेका हुन त ? मधेशि किन तयार छैनन पहाडि हरु संग घुलमिल हुन ? यसबाट अर्को प्रश्न उठेको छ । मधेशि को ध्यरा पिडित छन त ? के पहडिया हरु बाट वा फेरि मधेशि ठेकेदार हुँ भन्ने हरु बाट ? हो दधेशि हरु छन तर पहाडिया हरु बाट होइन तिनिहरु बाट छन जो आफुले आफुलाइ मधेस को ठेकेदार भन्ने गरेका छन । होइन भने यिनि किन डराइरहेका छन पहाडियाहरु सँग ? मधेशि शोजा छन उनिहरु संग जे गर्दा पनि औला उठाउने हिम्मत गर्देनन् तेसैले उनि हरुमा राज गर्न सजिलो छ पहाडियाहरु सँग सजिलो छैन उनिहरु बाठो छन , राज गर्न गार्हो छ भन्ने बुझेका छन । तेसैले यि हर्कत गइरहेका छन यि मधेशी को नाममा कलंक हरू ।
नेपाल को कुनै पनि ठाउको तुलना मा मधेश बिकाश को निम्ति अति सजिलो क्षेत्र हो । मधेश मा राजनेता भन्ने हरु राज्यका मन्त्रि पद पड्कायेर बसेको बेलामा के गरे ? अहिले सम्म मधेशको बिकास के मधेशि ले गरेका हुन् ? अब मधेशि नेता हुं भन्नेहरु कँहा थिए ? जब भरतिय सुरक्षा दस्ता नेपाल छिरेर तिनै मधेशि हरुलाइ कुट्ने गर्छ । कहाँ छन तिनै मधेशि नेता जबकि देशको सिमान तेहि मधेस म मिचिरहेको छ । कहिले १ शब्द बोलेका छन ? तिनै ले आज भन्दै छन आफुले आफुलाइ सच्चा मधेशी । यस्तोलाइ नेता होइन दलाल भन्छन । मधेशको जनता कति सोजो रहेछन् त ? तिनै दलाल ले मर ५० लाख दिन्छु भन्दा मर्न तयार भए ।
न यिनि हरु सङ्हियता चहन्छन् न त सम्विधान् । यिनि असान्ति चहाने र तिनै जनता लाइ लुट्ने हरु हुन् जस्को नाममा आज राजनिति गर्दै छन । जब मन्त्रि बन्छन् कोहि बोल्ने वाला छैनन् । किनकि तेति खेर राज्य को ढुकुटि लुटि रहेको बेला जो जनता को किन सम्झिने ? केको आवश्यक्ता ति जनताको कुरा गर्न जतिबेला भोको हुन्छ तेति खेर कराउने बानि परेका हरु तिनै जनता लाइ मारि रहेकाछन् । रगतमा होलि खेल्ने बानि परेका उपेन्द्र यादब सच्चा मधेशि रे । भारतकै इशरामा नाच्ने हरु आफुले आफुलाइ सच्चा मधेशी रे । हिजो माओवादि हरु ले मारेको र आज मधेशि नेताले मर्न को लागि प्रेरित गर्ने बिच के फरक यिनि हुन् आतन्कबादि ।